बहुमत जनतामा अझै राजनीतिक चेतना र सांस्कृतिक स्तरको कमी छ। जनतामा राजनीतिक चेतनाको कमीले गर्दा निर्वाचनमा बहुमत जनतामाथि रजाइँ गर्ने दलहरू नै जितिरहेका छन्। अझै कति मतदाता पैसा या अन्य लोभलालचमा बिक्छन्, फस्छन् त कतिले लहैलहैमा कुनै उम्मेदवारलाई जिताउँछन्। जित्नेलाई मतदान गर्ने मतदाता या सर्वसाधारण जनताको सङ्ख्या पनि कमी छैन। कहिले नेका ठूलो दल, कहिले माओवादी केन्द्र ठूलो दल बन्नुको कारण जनता सचेत नहुनु नै हो। कुनै दलको सिद्धान्त र विचार बुझेर जनताले मतदान गरेका भए दलले पाएको मतमा आकास पातालको फरक हुँदैन।
सिद्धान्त र विचारको आधारमा राखेको मत परिपक्व मत हो। त्यस्ता सचेत मतदाताहरूको भोट कसैको लोभलालचमा फस्दैन, पैसामा बिक्दैन। वास्तवमै मतदाताले सिद्धान्त र विचारकै आधारमा मतदान गर्नुपर्छ। आ–आफ्नो अमूल्य मत पैसामा बिकाउनु हुँदैन, पशुपक्षीजस्तै मतदाता बिक्नु हुँदैन। व्यापक जनता राजनीतिक रूपले सचेत र सङ्गठित नभएकैले पूँजीवादी दलहरूले राज गरिरहेका हुन्। अहिले मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ठूला दलका नेताहरूले अहिलेदेखि पैसा खर्चको निम्ति जोहो गर्न थालेका छन्।
पैसाको छेलोखेलो गरेर, धाक धम्की दिएर, लोभलालच देखाएर जितेका उम्मेदवारहरूले के देश र जनताको सेवा गर्छन्? कुनै दलले उठाएका उम्मेदवारहरू जनताको सेवा गर्न लायकका छन् कि छैनन्? जनताले चिन्तनमनन गर्नुपर्छ। जनताको सेवा नगरेका, जनताबीच नभिजेका दलका उम्मेदवार उठाउँदा या त्यस्ता उम्मेदवारलाई जिताउँदा कसरी असल जनप्रतिनिधि जित्छन्? नीति निर्माण गर्ने स्थानमा जो कोही व्यक्ति जित्दा राम्रो नीति पारित हुँदैन। कुनै सरकारले देशघाती र जनविरोधी नीति बनाए पनि मौन रहने या समर्थन गर्ने उम्मेदवारलाई जिताएर कसरी देशको भलो हुन्छ?
मतदाताले जित्नेलाई मतदान गर्ने होइन। सही सिद्धान्त र विचार बोकेका दलका उम्मेदवारलाई हामीले मतदान गर्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ। ठूला दलका नेताहरूको चर्तिकला हामीले धेरै हेरिसकेका छौं। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरे पनि चुँ नबोल्ने दललाई हामीले मतदान गर्नुहुँदैन। नेपालको संविधान संशोधन गर्न दबाब दिने र दबाब दिए पनि चुप लागेर बस्ने दललाई मतदान गर्नुहुँदैन। सरकारको नेतृत्त्व गर्ने नाउँमा जो कोहीसँग मिल्ने र सिद्धान्त र विचार नै पाखामा थन्काएर राजनीति गर्ने दललाई हामीले मतदान गर्नुहुँदैन। हामीले कसैले बोलेको, दिएको अभिव्यक्ति भन्दा यसअघि देश र जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यसबारे देशभरका मतदाताले विचार गर्नुपर्छ र विचार गरेर सही दलका सही उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ।